Archive du 20170812
Fitsaram-bahoaka Tsy mety voafehin’ny fanjakana
Miverina mirongatra indray ny fitsaram-bahoaka amin’izao fotoana izao, ka tamin’ity herinandro ity dia olona 3 no matin’izany.
Jean Omer Beriziky Marefo ny fahefam-panjakana
Tsy misy ny fitoniana eto amin’ny firenena satria miaina ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka Malagasy.
Kongresin’ny TIM -Toamasina Noraràn’ny fanjakana indray
Nolavin’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny OMC ivondronan’ny prefektiora sy ny mpitandro filaminana ny fanatanterahana ny Kongresin’ny Antoko Tiako I Madagasikara sady fanamarihana ny faha-15 taona, izay hatao any Toamasina anio.
Antsojay atao amin’ny mpiasa Mampitandrina ny Fisemare
Nampahafantarina tetsy Ankadivato omaly fa tafatsangana ara-dalàna ny atao hoe ADPSCE na ny fikambanan’ireo delegen’ny mpiasa izay mivondrona mba hiahy bebe kokoa ny sosialin’ireo mpiasa eto amin’ny nosy.
Depiote TIM - Rasoanoromalala Marie Horace Nanampy an’ireo mpamboly varin’Ambohimanarina indray
Mitohy hatrany ny asa sy tolotanana ataon'ny Depiote Rasoanoromalala Marie Horace sy ny Fikambanan'ny Mpamboly eny Avaratr'Ambohimanarina ny FIMPIMIA tarihin'Atoa Mamy,
Fandrobana volam-panjakana Raikitra ny kajy maloto
Miverina indray ve ny kajikajy politika hahafahana mandroba ny volam-panjakana, ka nanesorana ny tompon’andraikitra ambony maro ?
“Bord” ao Mahajanga maloto sy maimbo Nandraisana fepetra manokana
Nanao fanambarana ny amin’ny fandaminana ara-pifamoivoizana anatiny sy ny fahadiovan’ny tanàna ao Mahajanga ny Lehiben’ny faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar ny Alakamisy 10 aogositra,
Grand salon M’AUTOCCAZ Hiseraserana fiara sy môtô efa niasa
Nanomboka omaly zoma etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ary haharitra telo andro ilay hetsika “Grand Salon m’autoccaz” karakarain-dRakotomanga Haingo,
Nosy maha onena
Mpitondra tsy mahay mihaino, vahoaka mahantra, firenena anjakan’ny kolikoly sy feno fandikan-dalàna.
Hala-bola amina miliara tao amin’ny banky Hifampitadiavana Razakarivony Yves
Lehilahy iray antsoina hoe : Razakarivony Yves Rivofanantenana Daniel na iYves, 40 taona no karohin’ny Polisy misahana ny ady heloka bevava sakelika voalohany mafy etsy Anosy amin’izao fotoana izao.
Tsenan’ny Pavillon Analakely Niara-nanadio ny CUA sy ny mpivarotra
Antoky ny filaminan’ny tanàna ny fahadiovana, ka mitohy hatrany ny fanadiovana faobe eo anivon’ny Boriboritany Voalohany eto Antananarivo.
Herilanto Raveloharison “Ilaintsika ny famatsiambola avy any ivelany”
Tsy ampy hampandrosoana ny fivoaran’ny ekonomia Malagasy hatreto ny fidiram-bola anatiny, hoy ny minisitry ny Toekarena sy ny Teti-pivoarana Herilanto Raveloharison.
Tanora miatrika fiofanana arak’asa Notohanan’ny Aquamad sy Schneider Electric ara-pitaovana
Ny tanora no tena ho avin’ny firenena iray ka mila fanohanana hoy Andry Ramaroson, anisan’ire tompon’andraikitra eo anivon’ny orinasa Schneider.
Airtel beach party Fahombiazana, nahatratra 10.000 ny olona tonga
Fahombiazana tanteraka no azon’ny orinasam-pifandraisana Airtel Madagascar sy ny F&H tamin’ilay hetsika Airtel Beach Party notanterahina tao Mahajanga ny 06 Aogositra lasa teo.
Kaomisera Alexandre Nafindra toerana tampoka ?
Araka ny loharanom-baovao iray dia amin’nyalatsinainyizao no miandraikitra farany ny asa maha tompon’andraikitry ny serasera azy eo anivon’ny polisim-pirenena ny kaomisera AlexandreRanaivoson.
Miombo ny aretin’ilay mpanao gazety Andry Ratovo tsaboina eny amin’ny hopitaly Befelatanana sampana Néphorologie efitrano faha-18.